Ravinala Airports fitaovan-tsekoly maro ho an’ny sekoly eny Ivato | NewsMada
Ravinala Airports fitaovan-tsekoly maro ho an’ny sekoly eny Ivato
Ao anatin’ny paikadin’ny Ravinala Airports, mitantana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosy Be, ny fanohanana ny lafiny sosialy (RSE) ho an’ny mponina manodidina ny faritra iasany. Anisan’izany ny lafiny fanabeazana.
Maro ny fitaovan-tsekoly, natolotry ny orinasa Ravinala Airports, ho an’ny sekoly maromaro eny Ivato. Nahazo dabiliom-pianarana, latabatra larimoara, fampirinana entana, ny alakamisy 29 avrily teo. Nandray ireo ny talen-tsekoly, Rtoa tale isany, Rakotoarijaona Lovaniaina (EPP Ivato Base), Rtoa Ralaigaly Lantoharisoa (EPP Ivato Aéroport) ary Randriambololona Henintsoa (CEG Ivato Aéroport). Nahazo ny anjarany koa ny lisea Ivato Aéroport sy ny foibe fitaizana zaza kamboty Mangoraka, ny zoma 30 avrily. Misy ny fitaovana manokana toy ny “comptoir mobile” sy ny latabatra “ovale” ho an’ny foibe fitaizana zaza kamboty.
Nanatrika ity fotoana faharoa ity ny talen’ny QHSSSEMR, kaomandin’ny seranam-piaramanidina Antananarivo ao amin’ny Ravinala Airports, Rtoa Ratsimbazafy Felana, niaraka amin’ny mpiara-miasa aminy. Nambarany fa amin’ny maha orinasa tompon’andraikitra ny Ravinala Aiports, mias hampisy voka-tsoa ho an’ny mponina manodidina ny seranam-piaramanidina, toy ny kaominina Ivato sy ny Anosiala. Imasoan’ny orinasa ny fanohanana ny fanabeazana sy ny fampandrosoana ny tanora.